Heart Museum: နာဂစ်ရယ်........ အညှာအတာကင်းလှချေလားကွယ်........
ခင်ဗျားလွှတ်လိုက်တဲ့ နာဂစ်ဆိုတဲ့ကောင် လက်ချက်နဲ့......
အခုတော့ မြင်မကောင်း အလောင်းချင်းထပ်
လူ(၂၅,၀၀၀)ကျော်တောင် သတ်ရက်သတဲ့လား..... ။ မိုးနတ်မင်းကြီးရယ်........
အမှားရှိရင်လည်း ပြေပါစေ... ၀ဋ္ဋ်ရှိရင်လဲကြေပါစေ....
If you live in the US & want to contribute your generosity,
you could reach them at the following email.
• လင်းလက်၊ ဒုတိယထပ် Peninsula Plaza
• Sin Myanmar တတိယထပ် Peninsula Plaza
• သပြေနု (ဒေါ်သန်းသန်းနု) နှင့်
• လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်တို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့မဟုတ် ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ အဖွဲ့မှ
• ကိုအေးကိုကို - ၉၆၃၅ ၂၀၆၄
• ကိုဝင်းကျော် - ၈၁၈၉ ၈၄၂၀
• ကိုစိုးထွန်း - ၉၄၈၇ ၄၄၁၃
• ကိုမင်းသိန်း - ၈၁၈၆ ၀၀၄၂
• ကိုညီ - ၉၇၄၂ ၀၉၀၅
• ကိုသူရိန်ဝင်း - ၈၁၈၆ ၈၁၅၆
• မလဲ့လဲ့ - ၉၂၇၂ ၆၇၄၄ တို့ကိုလည်း ဆက်သွယ်ကာလှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။)
Dr. Soe Htet
69 Glendale Road
Mobile: +61 424 836 727
Contact Info: 0787 7297 205,
AccountNo: 4154 6694
Contact Info: Ko Win T - 0785 2175 467,
Ko Chan N - 0780 4725 077
OR please sendacheck to
ရုရှ မှာ ကျောင်းသားများ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက်
Bauman State University BMSTU
Naung Naung :Room no: (508) building 3A . str. Gloylanovskyar . Hostel of B.M.S.T.U
index ( 105094) Ph: +7- 909 -157 -11- 74
Black Dream : http://blackdream21.blogspot.com (blackdream21@gmail.com)
MIET မှ ကျောင်းသားများ မြန်မာပြည် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံနေရသော ပြည်သူများ အတွက် အလှူငွေများကို အောင်စိုးလွင် (၄၄၂၃) တွင် ထည့်ဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Ko Kyaw Naing Win (http://www.ait.ac.th/) AITMF@ait.ac.th st105800@ait.ac.th
(မလေးရှားမှာ) ကိုဇော်ထွန်းဝေ-(Limkokwing University) – 0176429431 ကိုအောင်နိုင်မင်း Taylors college hotel and tourism) – 0122428231 ကိုရဲဝဏ္ဏအေး (Monash University Sunway) –0162645761 ကိုလွင် (organizer)– 0173109722 ကိုအောင်ဇော်ဝင်း (Mydyn foodcourt) – 0163798950 ဒေါက်တာမိုးထွန်း( Asia clinic Puchong) + အန်တီမျိုး- 0169262206
***ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများကို ကိုဟန်သစ်ငြိမ်၊ ကိုနတ်ရှင်နောင်၊ဖြန့်ကျတ်ထားသော ကျွန်တော်၏ ၀ိညာဉ်များ၊Black Dream၊ Apprenticeship တို့ထံမှ စုစည်းဖော်ပြပါသည်။***
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ငိုရလွန်းလို့ ဘယ်လို စကားလုံးမှ ထွက်မလာတော့ဘူး ကံကိုသာ အပြစ်ပုံချစတမ်းဆိုရင် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကပဲ အပြစ်ဖြစ်နေတော့သလားး မိုးနတ်မင်းကြီးရယ်.....................း((((((((((((((
Well done my friend. Thanks for your willingness to support us naw. Do you need add; to send your donation? Please do extent it to your community too naw. I can share how we are going to distribute the goods to people, when you have time.
Great thanks Heart yay..
ကဗျာဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျမိပါတယ် ကိုအညတရရေ။ ကိုယ်တိုင်က လောလောဆယ် တတ်နိုင်သလောက် ငွေပဲလှူနိုင်တော့ ကမကထလုပ်ဦးဆောင်ပြီး အလှူငွေတွေ စုဆောင်းကောက်ခံပေးနေတဲ့သူ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေ....
အကို အညတရ !
ကဗျာလေးကောင်းတယ် အားပေးနေပါတယ် အဆင်ပြေပါစေရှင်...း)
အစ်ကို ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ ဆောင်းပါးနဲ့ အတူ ဖော်ပြချင်လို့ လိပ်စာတွေယူသွားပါတယ်..။ အစ်ကိုခွင့်ပြုမယ်ထင်ပါတယ်..။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်လည်း အစ်ကိုလိပ်စာပေးထားတဲ့ နောင်နောင် ဆိုတဲ့ကျောင်းသားနဲ့က တစ်ကျောင်းထဲကပါ BAUMAN(BMSTU)...။ အကယ်ရ်ျသူ့ကို ဆက်သွယ်လို သူများ ဆက်သွယ်လို့ ခက်ခဲမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို လည်းဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းပါ...။